भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस् – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस्
१) आफ्नो गुड लक बढाउन घरभन्दा बाहिर गमला राखेर त्यसमा बिरुवा रोप्नुस्। गमलामा तीन सिक्का राख्नुस्। सकेसम्म निलो गमलामा बिरुवा रोप्नुस्।२) घर वा कार्यालयमा यस्तो कुर्सी प्रयोग गर्नुस्, जसको पछाडिको भाग सामान्य कुर्सीभन्दा अग्लो होस्। घरमा राखिएको पेन्टिङ वा तस्बिर आफ्नो उचाइभन्दा अग्लो हुनुपर्छ। यसले गुड लक बढाउन मद्दत गर्छ।